Okhilimu bokudiliza amadoda: izinzuzo, amathiphu nemikhiqizo engcono kakhulu | Amadoda aSitayela
Okhilimu bokwehlisa abesilisa
Okhilimu bokuchitha umzimba bangezinye zezinketho okufanele uzicabangele uma ufuna ukususa ezinye noma zonke izinwele zomzimba wakho. Amanye yi-wax, i-razor, i-shavers yomzimba, nokususwa kwezinwele ze-laser.
Ukusebenza kwayo kulula futhi banezinzuzo ezilandelanayo kunezinye izindlela, yize kungenayo imiphumela emibi engaba khona (ukucasuka, izinwele ezingaphakathi ...) noma izixwayiso lapho uzisebenzisa. Thola ukuthi ziyini nokuthi yimaphi okhilimu abachitha amadoda angcono kakhulu:
1 Zisebenza kanjani?
3 Ukuqapha namathiphu
4 Okhilimu abahle kakhulu
Ukusebenza kwama-depilatory okhilimu kusekelwe izinto ezifakwe kumafomula abo ezincibilikisa shaft yezinwele. Njengoba zingamakhemikhali, futhi abanye abantu bezwela kakhulu kulezi zithako, ngaphambi kokuzisebenzisa kuwo wonke umzimba, kuwumqondo omuhle ukuwuhlola engxenyeni encane yomzimba kuqala. Umgomo ukubona ukuthi ngabe kukhona yini uhlobo lokusabela okungalungile okwenzekayo.
Ngemuva kokufaka isicelo kuyadingeka ukuthi ulinde ukhilimu osebenzayo. Isikhathi singahluka ngokuya ngomkhiqizi. Ekugcineni, kufanele uqhubeke nokuhlanza ukhilimu ngqo emzimbeni futhi yilokho kuphela. Izinwele zihlala kukhilimu, okuholela endaweni egcotshwe kahle.
Abantu abaningi bayeluleka ngokusetshenziswa kokhilimu abachitha umzimba Ngenxa ngqo kulawo makhemikhali ancibilikisa izinwele. Uma ukhetha ukususwa kwezinwele okungokwemvelo, futhi ungakhathazeki ngokuthi kufanele utshale isikhathi esithe xaxa, cabanga ngezinye izindlela, njengezinsingo noma izinsimbi zomzimba.
Uma ufuna ukususwa kwezinwele okusheshayo futhi okungenabuhlungu, lo ngumkhiqizo wakho. Uma kuqhathaniswa ne-wax, ukhilimu we-depilatory uvame ukushesha futhi kucace ukuthi awubuhlungu kangako. Empeleni, inqubo engenabuhlungu ngokuphelele. Ukususwa kwezinwele ze-Laser kunenzuzo efanayo, kepha okhilimu bashibhile kakhulu (okungenani esikhathini esifushane).
Ukusetshenziswa kwayo kulula kakhulu. Akudingeki ukuthi ube yingcweti ukuze usebenzise ukugcwala ukhilimu. Umane nje usebenzise ukhilimu endaweni oyifunayo noma ezindaweni bese ulinda imizuzu embalwa ukuze isebenze. Kamuva umkhiqizo ususwa kalula ngaphansi kweshawa noma nge-spatula.
Kuyindlela ephumelelayo. Ayisusi u-100% wezinwele, kepha uma zisetshenziswe kahle zingasondela kakhulu. Kukhona ukukhuluma ngamaphesenti we-90 noma i-95% kuya ngomkhiqizi.
Ukunaka imiyalo kubaluleke kakhulu uma kuziwa ekusebenziseni okulungile kwanoma yimuphi umkhiqizo, futhi lokhu akunjalo. Kungaleso sikhathi kuphela lapho ungathola khona okuningi futhi ukusisebenzise ngokuphepha. Imininingwane yemiyalo ukuthi yiziphi izingxenye ezithile ukhilimu we-depilatory owenzelwe zona. Lokhu kungukhiye ngoba ezinye zingasetshenziswa ezindaweni ezizwelayo, kanti ezinye azikwazi.
Zonke izindawo azidingi inani elifanayo lomkhiqizo. Lapho izinwele zincane kakhulu, ungqimba oluncane lwanele, kanti lapho kukhona ubukhulu bezinwele obudingekayo ukwakha ungqimba olujiyile. Lelisu lizokuvumela ukuthi ugcine umkhiqizo futhi wandise ukusebenza kahle kokususwa kwezinwele.
Isikhathi singesinye isibonakaliso somenzi okufanele sicatshangelwe. Faka i-chronograph yakho egiyeni futhi ungashiyi ukhilimu isikhathi eside kunalokho okushiwo. Ukulahleka kungadala noma yini kusuka ekucasukeni kwesikhumba kuya ekushiseni kwamakhemikhali esimweni esibi kakhulu. Uma ukhetha ukuyidlala iphephile, ikakhulukazi okokuqala usebenzisa umkhiqizo othile, kungumbono omuhle ukuwushiya isikhathi esincane kunesibekiwe.
Ezinye izinwele zingahlala zingakhishiwe ngemuva kokukhipha ukhilimu. Kuyinto ejwayelekile kakhulu. Kuleso simo kungcono ukuthi ungaphinde ufake ukhilimu owengeziwe ngokushesha, kepha ulinde usuku olulandelayo. Uma zigqamile kakhulu, cabanga ukuzikha ngezimpintshisi noma usebenzise insingo.
Okhilimu abahle kakhulu
I-Nair Remover Body Cream es Kungenzeka ukhilimu wokususa izinwele olinganiswe kakhulu. Ngokungafani neminye imikhiqizo, iNair ifaka i-plunger esebenzayo. Ngaphezu kwalokho, yenzelwe ishawa: faka esikhunjeni esomile bese ulinda okungenani umzuzu ngaphambi kokungena eshaweni. Ngemuva kwalokho kufanele ugeze njengoba ujwayele ukwenza (ukugcina izindawo lapho kufakwe khona ukhilimu kude namanzi aqondile) bese ususa umkhiqizo ngemuva kwemizuzu emi-2-10 kuye ngobuningi bezinwele.
I-Veet ingenye yemikhiqizo yokhilimu yokususa izinwele ethandwa kakhulu. Futhi inemikhiqizo eyenziwe ikakhulukazi yamadoda. Inketho enamandla kunazo zonke kungenzeka ukuthi eyakho ukhilimu wokwehliswa isikhumba esibucayi. Phakathi kohlobo lwayo oluningi lokugcotshwa kwamadoda sithola i- isifutho sokudiliza ngemibono embalwa evumayo.
Kuthulwe ngokufakwa okulula okumnyama, ICollistar ngolunye ukhilimu wesilisa owaziwayo. Ngokusobala iyi- ukhilimu ofanele endaweni esondelene, ukusetshenziswa cishe bonke abakhiqizi abeluleka ngakho. Olunye uhlobo lomkhiqizo okufanele ulugcine engqondweni uma uthathe isinqumo sokusebenzisa i-cream waxing EzikaNad. Njengangaphambilini, yenzelwe isikhumba nezinwele zesilisa.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Izimonyo » Okhilimu bokwehlisa abesilisa
Ukuphuma ngaphambi kwesikhathi